अब भारत जान नेपालीका लागिपनि भिसा आवश्यक . - Gulf Sandesh
अब भारत जान नेपालीका लागिपनि भिसा आवश्यक .
June 24, 2019 June 24, 2019 GulfSandesh0Comments
भारतस्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै चीन, मकाउ, हङकङ र पाकिस्तानबाट भारत जाने नेपालीहरुका लागि भारतको भिसा आवश्‍यक पर्ने सूचना जारी गरेको हो । सूचनामा भनिएको छ, चीन, मकाउ, हङकङ र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपालीहरुका लागि भारतको भिसा आवश्‍यक पर्ने जानकारी प्राप्त भएकोले सोही बमोजिम गर्न हुन जानकारी गराइन्छ ।
त्यस्तै यसअघि वैशाख अन्तिमा एक सूचना जारी गर्दै भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा नेपाली दूतावासको नो अब्जेकसन वा सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने जनाएको थियो । पटक पटक उक्त नियमका कारण झञ्झट र अप्ठेरो परेका गुनासो आएपछि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यस्तो नियम ल्याएको बताएको थियो । भारतीय अध्यागमन पार गरेर तेस्रो मुलुक जानु पर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि दूतावासको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान परेमा नो अब्जेकसन वा सिफारिस पत्र आवश्‍यक पर्ने भएको हो । यसअघि भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर नेपालीलाई भारतीय अध्यागमबाट जान रोक लगाएको थियो ।
← आजको राशिफल २०७६ साल असार ०९ गते सोमवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ जुन २४ तारिक।
नायक सरोज खनाल १७ वर्षको अमेरिका बसाइ सकेर नेपालमा पोल्ट्री पसल’ खोलेर अन्डा बेच्दै। →
संखुवासभा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले विश्वभरिका संखुवासभाली लाई काठमाडौंमा भेला गर्दै।
आइजी खनालको सुझाव : चालकलाई अपराधीलाई झैँ व्यवहार नगर्नु।
February 21, 2019 GulfSandesh 0
धर्मपरिवर्तनको मुख्य लक्ष्यसहित भित्रिएका विदेशी कार्यक्रम लाई समाज कल्याणबाट स्वीकृत।
December 9, 2018 GulfSandesh 0